र्यालीमा निस्किएका डाक्टर प्रहरी नियन्त्रणमा | NepalDut
र्यालीमा निस्किएका डाक्टर प्रहरी नियन्त्रणमा
नेपालदूत , काठमाडाै‌ं
डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट र्याली निकालिरहेका डाक्टरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै प्रहरीले १ दर्जन भन्दा बढी डाक्टर पक्राउ गरेको हाे ।
आज बिहान शिक्षण अस्पतालबाट डा. केसीको समर्थनमा निकालिएको र्याली शितल निवासतर्फ जानेक्रममा प्रहरीले धरपकड गर्दै डाक्टरहरु पक्राउ गरेको हो ।प्रहरीले नेशनल रेसिडेन्टल डाक्टर एशोसियसनका अध्ययक्ष डा. सुमित पाण्डेसहित र्यालीमा रहेका डाक्टरलाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपनि केसी समर्थक डाक्टर तथा सर्वसाधारण आन्दोलित भएका छन् । केसीको समर्थनमा रहेका डाक्टरहरुले सोमबारदेखि नै शिक्षण अस्पताल परिसरमा रिले अनशन सुरु गरिसकेका छन् ।